"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : ၁၈။ Dynamic Views အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
၁၈။ Dynamic Views အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
အကယ်၍သင် Dynamic Views ကိုစတင်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက Preview မှာမြင့်တက်လာမှုကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ Blog ပေါ်က လှုပ်ရှားမှု အားလုံးရဲ့ သတင်းအချက်လက်အားလုံးကို Dynamic Views ကဖေါ်ပြပေးမဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Post တစ်ခုကို ကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့ အချက်တိုင်းကို Pageview အဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ဝင်ဖတ်သူက Post 10 ခုကိုကလစ်နှိပ်ရင် အဲဒီ အချက်ရေအတိုင်း Pageview 10 ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Traditional Blogger Template များမှာတော့ စာဖတ်သူက အောက်ဆုံးထိဆင်းဖတ်ပါမှ Pageview တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့မချိန်အတွင်း သင့် Blog ရဲ့တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှု လှုပ်ရှားမှုကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ အရင်ကဖြစ်နိုင်တာတွေထက် ပို၍တိကျမှန်ကန်သောသင့် Blog ရဲ့သတင်းတွေကို ရိုးရှင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်နေပါတယ်။
Blogger ကသင့်ကို လုပ်နိုင်စွမ်းသောနည်းများကို ပေးရန် သင့်ရဲ့ မာတိကာများကို several new and exciting ways ဒီနေရာမှရှာပါ။
Dynamic View ကိုအခြားသောပစည်းများနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ရန် သီးသန့်စီစဉ်ထားပါသည်၊ အောက်မှာပြထားသောပုံက Template နေရာမှာကလစ်နှိပ်ပါ။ Template Designer View7ခုထဲတွင်သင်သုံးလိုသော Dynamic View ကိုရွေးပါ။ သင်ဒီလိုရွေးခြယ်လိုက်ပေမဲ့လဲ သင့်ရဲ့ ဆိုဒ်ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးစာဖတ်ကြမည့်သူများမှာနှစ်သက်မှုရှိမယ်ဆိုရင် သူတို့မှာလဲအခြားသော View ကိုရွေးချယ်ကြည့်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ Blog ကို သင့်ဆိုဒ်သို့ဝင်သူများအတွက်
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပေးပြီးလက်တွေ့စမ်းသတ်လုပ်ဆောင်စေလိုသော ဆန္ဒရှိပါက သင်စိတ်ချလက်ချအနားယူပြီး သင့်ရဲ့ Gadget များနှင့်သင့်ရဲ့ အခြားသော Setting များသည်မူလအခြေနေကိုထမ်းသိမ်းထားပြိး အကယ်လို့သင်ဆန္ဒက Traditional Template ကိုပြန်ပြောင်းယူလိုပါကပြောင်းနိုင်ပါသည်။ သူမူလ Template အတိုင်းပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ် ဒိလိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက် "Revert to previous template" ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ရုံဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Template အသစ်ဆစ်ခုကိုရွေးခြယ်ခြင်းမှာတော့ Traditional Template ကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပုံစံဟာ မူလပုံစံအတိုင်းရှိနေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ဒါကြောင့် Blogger ကအကြံပေးထားတာကတော့ သင့်ရဲ့ Traditional Template ကိုအရင် Backup သို့မဟုတ် Restore လုပ်ထားရန်အကြံပေးထားပါတယ်။ တကယ်လို့သင်က ယခင်ကအသုံးပြုသူလွယ်ကူအောင်ကြားခံဆက်သွယ်ပေးသောစနစ်ကို သုံးထားပါက Design | Edit HTML မှာရှာပြီးသုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ သင့်ဆီမှာ Pages အထောက်ကူပြုရှိပါက အောက်မှာပြထားသော Drop-down Menu လိုမျိုးကိုသင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် Dynamic View နှင့်နောက်ထပ်ဆိုဒ်တစ်ခုလုပ်ပြီး Link ချိပ်ပြသပေးရန်အစီစဉ်ရှိပါတယ်။
အောက်ပါအချက်လက်များမှန်ကန်ပါက Dynamic View ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းတိုမှာ သင်ရဲ့ Blog ကို Publish ကြေငြာပေးထားရပါမယ်။
သင့်ရဲ့ဆိုဒ်ကိုဝင်မည့်သူက Sign In လုပ်စရာမလိုဘဲ သင့် Blog ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင့် Blog မှာအပြည့်အဝအထောက်ကူပြုမှုရှိနေမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Settings | Other မှာ Allow Blog Feed ကို Full ကိုရွေးထားပေးပါ။
တကယ်လို့သင်က ယခင်ကအသုံးပြုသူလွယ်ကူအောင်ကြားခံဆက်သွယ်ပေးသောစနစ်ကို သုံးထားပါက Settings | Site feed မှာရှာပြီးသုံးခွင့်ရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Blog ကနေပြီး AdSense ကနေကြော်လက်ခံပြုလုပ်ပေးတာမျိုးကို Dynamic View ကဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Blogger ကနေပြီး “leaderboard” (header) နှင့် “skyscraper” (sidebar) တွေမှာရှိတဲ့ ကြော်ငြာပုံစံတွေကို စုစုပေါင်း View ခွန်နှင့်ခုကနေသင့်တော်သလိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ Stats for Dynamic Views, နှင့် Dynamic Views for Readers. ကိုလေ့လာပါ။
သင့်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးသင်ရဲ့ Blog များကို Blogger ကနေနည်းသစ်ခွန်နှစ်ခုပေးနေပါတယ်။
သင်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး Blog များကို Dynamic View က လွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ မဖတ်ရသေးသော ယခင့်ယခင်က Post များကိုသူတို့ဟာ အလွယ်တစ်ကူ ရှာဖွေပေးပါတယ်။ Blog ရေးသူများဟာသူတို့ရဲ့ Blog များက Dynamic View များကိုဖေါ်ပြရန် သီးသန့်စီစဉ်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒိပြင် သူတို့ရဲ့ Dynamic View ကိုသူတို့ရဲ့ Blog မှာ Post တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
To experienceablog in view other than the default, you can simply select another view style from the toolbar, which, in some views, collapses intoathin line as you scroll. For the toolbar to reappear, simply hover your mouse over the line.
Hit escape or click Back to all posts to return to the Flipcard view. In the upper left, click to sort by Recent, Date, Author and Category.